रेलले समृद्धि ल्याउला ? | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार रेलले समृद्धि ल्याउला ?
on: August 12, 2018 पाठक विचार
रेलले समृद्धि ल्याउला ?
केपी शर्मा ओलीले नेपालमा बुुच्चे रेल ल्याउने भनेर चुनावी नारा अघि सारे । प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि उनले रेलको रटान दिन छाडेका छैनन् । केही फाट्टफुट्ट काम भएको जस्तो पनि देखिन्छ । जयनगर–जनकपुर रेल सञ्चालनमा आएपछि नै नेपालका अन्य भूभागमा पनि रेल सञ्चालन गर्ने सम्भाव्यताबारे अध्ययन थालिएको थियो । तर, ती अध्ययनमा मात्रै सीमित भए । यसका लागि सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ सकिए पनि ठोस काम भने भएको पाइन्न ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनको सहयोगमा रेलवे सञ्चालनमा ल्याउने बारम्बार बताएपछि र चीनले यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग गरेपछि नेपालका रेलको सम्भावना र त्यसबाट आउने अवसर वा नोक्सानीबारे व्यापक चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।
अहिलेको सरकार वास्तवमा भन्ने हो भने रेल र पानीजहाजको नारा लगाएर सरकार बनाउन सफल भएको हो भन्न सकिन्छ । विकासको खाका कोर्ने र नेपालमा रेल, पानीजहाज ल्याएर समृद्धिको ढोका उघार्ने सङ्कल्प गरेको वर्तमान केपी ओली सरकारका सामु तत्तत् काम गर्नका लागी दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त छ । उसलाई काम गर्ने केही पनि अप्ठ्यारा छैन तैपनि गफ धेरै र काम कम भएकाले विस्तारै जनता यो सरकारप्रति विकर्षित हुन थालेका छन् । नेपालमा रेल नचलेको होइन । अहिले पनि जनकपुरसम्म रेल आएकै छ । तर, यो रेल नाममात्रको छ । यातायातको सुविधा पनि इतिहास धान्न मात्रै यसको सञ्चालन भइरहेको छ भन्न सकिन्छ । यो रेलको इञ्जिन यति धेरै पुरानो छ कि यसको निर्माताले म्युजियममा राख्नका लागि नयाँ रेल दिएर यो लैजाने प्रस्ताव आएको थियो भन्ने चर्चा पाइन्छ ।
नेपालमा काठमाडौं–पोखरा, वीरगञ्ज–काठमाडौं, केरुङ–काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम (मेची–महाकाली)मा रेलमार्ग बनाउने विषयमा निकै चर्चा चलेको पाइन्छ । वीरगञ्ज–काठमाडौंको काम भारतीय पक्षले गरिरहेको छ भने केरुङ–काठमाडौंका लागि चीनले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ भन्ने समाचार आएको छ । । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसै हिसाबले सरकारले बजेट व्यवस्था गरिदिने भने पनि यसको निर्माण गर्न एक डेढ दशक लाग्न सक्छ ।
रेल बने पक्कै पनि देशको अर्थतन्त्र र जनजीविकामा असर पार्नेछ । अहिले नेपालमा रेल सञ्जालका लागि जसरी चर्चा र विश्लेषण गरिएको छ, त्यो हेर्दा नेपालको बजेटले रेल बनाउन सकिन्न । कसैले ऋण दिएर बनाए त्यो आयोजनाले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा अर्थशास्त्रीहरूबीच विवाद रहेको पाइन्छ । ऋणको पासोमा परिन्छ भन्ने पिरलो केही अर्थशास्त्रीको देखिन्छ भने यसले खोल्ने सम्भावनाको ढोका अनगिन्ती भएकाले ऋणमै भए पनि चीनको रेल नेपालसम्म ल्याउनैपर्छ भन्ने विचार केहीको छ ।
भारतको रेलभन्दा चीनको रेल प्रविधि विश्वमै उच्चस्तरको पाइन्छ । नेपालजस्तो भूभागमा रेल बनाउने अनुभव भारतसँगभन्दा चीनसँग बढी छ । त्यसैले चीनबाट विश्वसँग जोडिन रेलमार्ग जरुरी देखिन्छ । हाम्रो निर्यात व्यापार कमजोर हुनुका कारण ढुवानी खर्च महँगो भएर हो । रेलबाट विश्वसँग जोडिन सकियो भने निर्यातको बाटो खुल्न सक्छ । त्यसो त आयात सस्तो पर्दा नेपाली उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । अहिले नै पनि भारतीय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली उद्योगहरू बन्द भएका उदाहरण छन् । त्यसैले राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप रेल बनाउन सकियो भने फाइदा हुन्छ । अन्यथा चीन वा भारतको स्वार्थअनुसार उनीहरूको लगानीमा रेलमार्ग बनाउन थालियो भने नेपाली अर्थतन्त्र झनै धरापमा पर्न सक्छ ।